Gacanqaad ka dhashay cida loo magacaabi lahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir - Caasimada Online
Home Warar Gacanqaad ka dhashay cida loo magacaabi lahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir
Gacanqaad ka dhashay cida loo magacaabi lahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya Villa Somalia ayaa sheegaya in Khilaaf ba’an uu ka taagan yahay cidda loo magacaabi lahaa xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa magaalada Muqdisho.
Khilaafka ka dhashay magacaabida xilkaasi ayaa la sheegay inuu cirka isku sii shareeray kadib markii kulan ka dhashay gacanqaad uu dhexmaray Madaxii ololihii doorashada Farmaajo Yusuf Jaalle iyo Fahad Yaasiin oo saaxiib dhow la ah Madaxweynaha Qaranka Maxamed C/llahi Farmaajo.
Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir uu la doonaayo shaqsi ay isaga saaxiib yihiin, halka Yusuf Jaalle oo ahaa Madaxii ololihii doorashada Farmaajo uu isna wato shaqsi ka duwan kan uu wato Fahad Yaasiin.
Kulan saacadihii ugu danbeeyay ka dhacay Villa Somalia oo u dhexeeyay Yusuf Jaalle iyo Fahad Yaasiin ayaa kusoo idlaaday buuq iyo gacan ka hadal, kadib markii ay isku fahmi waayen shaqsiyaadka ay kala wataan.
Xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxaa guud ahaan ololo ugu jira inkabada 7 Musharax oo mid waliba uu doonayo in loo magacaabo xilkaasi, halka labadaani Mas’uul ee isku gacanqaaday xilka ay ka yihiin shaqsiyaadka looga danbeeyo xulista cida loo dhiibi lahaa xilka.
Ololaha ugu badan ee iminka ka socda Villa Somalia ayaa ah ololaha xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, waxaana suuragal ah in xilkaasi aysan helin shaqsiyaadka ay ololaha ugu jiraan Yusuf Jaalle iyo Fahad Yaasiin.
Dhinaca kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa looga fadhiyaa inuu la imaado shaqsi ka duwan kuwa isku haya xilka, waxaana dhinaca kale la rumeysan yahay in Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf ”Boorsaani” uusan xilkaasi kusii raagi doonin.